သှားတိုကျပမေယျ့ ခံတှငျးနံ့မကောငျးဖွဈနတေဲ့အခါ - OnDoctor
By Wai Yan Lin	 On May 23, 2018 Last updated Dec 28, 2018
တစ်နေ့ကို ၂ကြိမ် သွားသေချာတိုက်နေပေမယ့် ခံတွင်းနံ့မကောင်းဘူးဖြစ်နေပါတယ် ? ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ယုံကြည်မှုမရှိတော့ပါဘူး ။ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ ?
ခံတွင်းနံ့ ကောင်းခြင်း ၊ မကောင်းခြင်းတွေက အချက်အလက်ပေါင်းများစွာ အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ဗျ ။
ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ၊ စားတဲ့အစားအသောက် ၊ ခံတွင်းကိုဂရုစိုက်မှု ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ၊ ပုံမှန်သောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါး စတာတွေကြောင့် ခံတွင်းနံ့ကပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ဆိုးနေတတ်ပါတယ် ။
အဓိကဖြစ်ရလေ့ရှိတဲ့အကြောင်းက ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်တာအားနည်း (သွားတိုက်တာနည်းစနစ်မကျ) လို့ပါ ။
မကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေက သွားကြိုသွားကြား ၊ လျှာမျက်နှာပြင်ပေါ်က အရသာခံအဖုလေးတွေကြား ၊ သွားဖုံးတွေပေါ်မှာ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနှုန်းအရမ်းများပြားလာရင် ခံတွင်းနံ့ကဆိုးလာမှာပါပဲ ။ ဒီဘက်တီးရီးယားတွေက သွားပိုးစားခြင်း ၊သွားဖုံးရောဂါတွေနဲ့လည်း ဆက်စပ်လျက်ရှိပါတယ် ။
သွားတိုက်တာနည်းစနစ်မမှန်ခြင်း ၊ သွားကြားပွတ်ကြိုး(Dental Floss)အသုံးမပြုခြင်း ၊ လျှာကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ပေးခြင်း စတာတွေကခံတွင်းနံ့မကောင်းခြင်းကိုဖြစ်လာစေပါတယ် ။
အစားအသောက်ကြောင့်လည်း ခံတွင်းနံ့ကဆိုးလေ့ရှိပေမယ့် ခဏတာမျှပါပဲ ။ ဆေးလိပ်သောက် ၊ ကွမ်းစားတာကတော့ ခံတွင်းကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်ပါတယ် ။ ဆေးလိပ်သောက် ၊ ကွမ်းစားခြင်းကြောင့် ခံတွင်းနံ့မကောင်းတဲ့အပြင် သွားတွေမှာအစွန်းထင်းတွေဖြစ် ၊ သွားဖုံးတွေညစ်ပတ်ပြီး လျှာရဲ့အရသာခံနိုင်စွမ်းပါ လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ် ။
သွားပိုးစားခြင်းနဲ့ သွားဖုံးရောဂါတွေအပြင် အခြားကိုယ်တွင်းရောဂါတွေကြောင့်လည်း ခံတွင်းနံ့ကဆိုးလေ့ရှိပါတယ် ။ တံတွေးထွက်နည်းခြင်း(Dry mouth) ၊ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းမကျန်းမာခြင်း ၊ ဆီးချို ၊ အသည်းနဲ့ကျောက်ကပ်မကောင်းခြင်း ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြသနာရှိခြင်း ၊ ဖျားနာခြင်းတွေကြောင့်လည်းခံတွင်းနံ့ကမကောင်းနိုင်ပါဘူး ။
😊😊ခံတှငျးနဲ့ပတျသတျပွီး ကနျြးမားရေးစဈဆေးမှု (Dental…
သှားပဲ့သှားရငျ ဘာတှပွေနျလုပျလို့ရလဲ ?
ရေရှည်သောက်သုံးရလေ့ရှိတဲ့ nitrate ပါတဲ့ဆေးဝါး ၊ ကင်ဆာအတွက်ဆေးသွင်းနေရသူတွေ မှာလည်းခံတွင်းနံ့ကောင်းလေ့မရှိပါဘူး ။
ခံတွင်းနံ့ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စနစ်တကျသွားတိုက်တတ်ဖို့လိုတဲ့အပြင် သွားကြိုသွားကြားတွေသန့်ရှင်းဖို့ dental floss သုံးပေးခြင်း ၊ လျှာညစ်ပတ်နေခြင်းမရှိစေရန် tongue cleaner သုံးပေးဖို့လိုပါတယ် ။ သွားဆရာဝန်နဲ့၆လ၁ကြိမ်ပြသပြီး သွားနဲ့ခံတွင်းကိုစစ်ဆေးပေးပြီး သွားပိုးစားတာ ၊ သွားဖုံးရောဂါတွေကို ကုသပေးရပါမယ် ။ ဆေးလိပ်သောက် ၊ ကွမ်းစား စတဲ့ဆိုးရွားတဲ့အလေ့အကျင့်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ရေများများသောက်ပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ် ။
တဈနကေို့ ၂ကွိမျ သှားသခြောတိုကျနပေမေယျ့ ခံတှငျးနံ့မကောငျးဘူးဖွဈနပေါတယျ ? ကိုယျ့ကိုကိုယျလညျး ယုံကွညျမှုမရှိတော့ပါဘူး ။ ဘာလို့ဒီလိုဖွဈရတာလဲ ?
ခံတှငျးနံ့ ကောငျးခွငျး ၊ မကောငျးခွငျးတှကေ အခကျြအလကျပေါငျးမြားစှာ အပျေါမှာမူတညျနပေါတယျဗြ ။
ကနျြးမာရေးအခွအေနေ ၊ စားတဲ့အစားအသောကျ ၊ ခံတှငျးကိုဂရုစိုကျမှု ၊ ဆေးလိပျသောကျခွငျး ၊ ပုံမှနျသောကျသုံးနတေဲ့ဆေးဝါး စတာတှကွေောငျ့ ခံတှငျးနံ့ကပုံမှနျမဟုတျပဲ ဆိုးနတေတျပါတယျ ။
အဓိကဖွဈရလရှေိ့တဲ့အကွောငျးက ခံတှငျးသနျ့ရှငျးရေးလုပျတာအားနညျး (သှားတိုကျတာနညျးစနဈမကြ) လို့ပါ ။
မကောငျးတဲ့ဘကျတီးရီးယားတှကေ သှားကွိုသှားကွား ၊ လြှာမကျြနှာပွငျပျေါက အရသာခံအဖုလေးတှကွေား ၊ သှားဖုံးတှပေျေါမှာ ရှငျသနျပေါကျဖှားနှုနျးအရမျးမြားပွားလာရငျ ခံတှငျးနံ့ကဆိုးလာမှာပါပဲ ။ ဒီဘကျတီးရီးယားတှကေ သှားပိုးစားခွငျး ၊သှားဖုံးရောဂါတှနေဲ့လညျး ဆကျစပျလကျြရှိပါတယျ ။
သှားတိုကျတာနညျးစနဈမမှနျခွငျး ၊ သှားကွားပှတျကွိုး(Dental Floss)အသုံးမပွုခွငျး ၊ လြှာကိုပုံမှနျသနျ့ရှငျးရေးမလုပျပေးခွငျး စတာတှကေခံတှငျးနံ့မကောငျးခွငျးကိုဖွဈလာစပေါတယျ ။
အစားအသောကျကွောငျ့လညျး ခံတှငျးနံ့ကဆိုးလရှေိ့ပမေယျ့ ခဏတာမြှပါပဲ ။ ဆေးလိပျသောကျ ၊ ကှမျးစားတာကတော့ ခံတှငျးကိုဆိုးဆိုးရှားရှားထိခိုကျပါတယျ ။ ဆေးလိပျသောကျ ၊ ကှမျးစားခွငျးကွောငျ့ ခံတှငျးနံ့မကောငျးတဲ့အပွငျ သှားတှမှောအစှနျးထငျးတှဖွေဈ ၊ သှားဖုံးတှညေဈပတျပွီး လြှာရဲ့အရသာခံနိုငျစှမျးပါ လြော့ကစြနေိုငျပါတယျ ။
သှားပိုးစားခွငျးနဲ့ သှားဖုံးရောဂါတှအေပွငျ အခွားကိုယျတှငျးရောဂါတှကွေောငျ့လညျး ခံတှငျးနံ့ကဆိုးလရှေိ့ပါတယျ ။ တံတှေးထှကျနညျးခွငျး(Dry mouth) ၊ အစာအိမျနဲ့အူလမျးကွောငျးမကနျြးမာခွငျး ၊ ဆီးခြို ၊ အသညျးနဲ့ကြောကျကပျမကောငျးခွငျး ၊ အသကျရှုလမျးကွောငျးဆိုငျရာပွသနာရှိခွငျး ၊ ဖြားနာခွငျးတှကွေောငျ့လညျးခံတှငျးနံ့ကမကောငျးနိုငျပါဘူး ။
ရရှေညျသောကျသုံးရလရှေိ့တဲ့ nitrate ပါတဲ့ဆေးဝါး ၊ ကငျဆာအတှကျဆေးသှငျးနရေသူတှေ မှာလညျးခံတှငျးနံ့ကောငျးလမေ့ရှိပါဘူး ။
ခံတှငျးနံ့ကောငျးခငျြတယျဆိုရငျတော့ စနဈတကသြှားတိုကျတတျဖို့လိုတဲ့အပွငျ သှားကွိုသှားကွားတှသေနျ့ရှငျးဖို့ dental floss သုံးပေးခွငျး ၊ လြှာညဈပတျနခွေငျးမရှိစရေနျ tongue cleaner သုံးပေးဖို့လိုပါတယျ ။ သှားဆရာဝနျနဲ့၆လ၁ကွိမျပွသပွီး သှားနဲ့ခံတှငျးကိုစဈဆေးပေးပွီး သှားပိုးစားတာ ၊ သှားဖုံးရောဂါတှကေို ကုသပေးရပါမယျ ။ ဆေးလိပျသောကျ ၊ ကှမျးစား စတဲ့ဆိုးရှားတဲ့အလအေ့ကငျြ့တှကေိုရှောငျကဉျြရမှာလညျးဖွဈပါတယျ ။ ရမြေားမြားသောကျပေးဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ ။
အပူရှပျခဲ့ရငျ ဘာတှလေုပျရမလဲ (Heat Stroke)